﻿	(Dilantin၊ rifampicin, griseofulvin သို့မဟုတ် St. John's Wort စတဲ့) အင်ဇိုင်းတက်ဆေးတွေကို အသုံးပြုနေရင် EC ထိရောက်မှု နည်းပါသလား။ | Find My Method
(Dilantin၊ rifampicin, griseofulvin သို့မဟုတ် St. John’s Wort စတဲ့) အင်ဇိုင်းတက်ဆေးတွေကို အသုံးပြုနေရင် EC ထိရောက်မှု နည်းပါသလား။
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ » အရေးပေါ်သန္ဓေတားဆေးများ » (Dilantin၊ rifampicin, griseofulvin သို့မဟုတ် St. John’s Wort စတဲ့) အင်ဇိုင်းတက်ဆေးတွေကို အသုံးပြုနေရင် EC ထိရောက်မှု နည်းပါသလား။
ပုံမှန်သန္ဓေတားဆေးများကိုထိရောက်မှုနည်းစေသည့် ဆေးများနှင့်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဟာ EC ဆေးထိရောက်မှုကိုလည်း နည်းစေနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်ကအင်ဇိုင်းတက်ဆေးကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုပါက EC ဆေးပမာဏကို တိုးမြှင့်ခြင်းဟာ အဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ်။ ဆေးပမာဏ ဘယ်လောက် တိုးသောက်ရမယ်ဆိုတာ သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနဲ့ ပြောသင့်တယ်။
World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. မှရယူရန် https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1
ဟော်မုန်းမပါသော IUD (သားအိမ်တွင်းထဲ့ကရိယာ)
Find My Method သည် အမေရိကန်အခြေစိုက် မှတ်ပုံတင်ထားသော 501c(3) အကျိုးအမြတ်မယူသော အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆက်နွယ်သည်။
Find My Method တွင် ပံ့ပိုးတင်ပြထားသော အကြောင်းအရာများသည် သတင်းအချက်အလက်ပေးရန် အတွက်သာ ရည်ရွယ်ထားပြီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
ဤ၀ဘ်ဆိုဒ် ပုံမှန်လည်ပတ်ရန် အမျိုးအမည်မသိ cookies ကွတ်ကီးများနှင့ အခြား၀န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုး လိုအပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ နှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဆိုင်ရာမူ၀ါဒများကို သင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဤဆိုဒ်ကိုဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် သင်သည် ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ခွင့်ပြုချက်ပေးနေသည်။